Ahoana ny fomba hanovana sary ho sary miaraka amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Tutorials
Adobe Photoshop manana fahafaha-manao tsy manam-petra ary ahafahantsika manao ny fanovana sy fanovana isan-karazany amin'ny sary sy ny endriny izay anaovantsika ho azy avy eo te-hivarotra. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana amin'izao fotoana izao tsara indrindra ary nanompo hanova ny tontolon'ny endrika sy sary hita miaraka amin'ny vaovao manaitra toy ity.
Androany dia hampianatra anao izahay ny fomba famadihana sary ho sary miaraka amin'ny Adobe Photoshop. Hampiasa sivana samihafa avy amin'ny galeriana sy ny tananay izahay mba hanomezana azy farany tena marina, hany ka toa niaraka tamin'ny pensilihazo sy ny famafana izahay nanao ny sarin'ny iray amin'ny fianakaviantsika na namantsika.
Alohan'ny hanombohana ny fampianarana dia azonao atao arosoy avy amin'ilay horonan-tsary navoakanay tao amin'ny fantsonay ny Creativos Online hanaraka ny dingana misy ary mora kokoa noho ny eto.
Dingana hanovana ny sary ho sary amin'ny Photoshop
Manoro hevitra anao izahay hampiasa ity sary eto ambany ity hanao ny tutorial:
Sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop, andao sosona duplicate miaraka amin'ny fifehezana + J.
Raha vantany vao voafantina ilay sosona avoaka, dia mankany isika "Mamorona sosona fanenenana na fanitsiana vaovao" ao amin'ny fanaraha-maso ny fikandrana Layers.
Ho lasa mainty sy fotsy ny sary.
Izahay izao dia mangataka fomba fampifangaroana "Dodge Color" amin'ny sosona duplicate na sosona 1.
Hiseho ireo tanjona kendrena rehefa lasa nandeha nanohy ny vokatra manaraka izahay.
Avadintsika amin'ny fifehezana + I ny loko ary hiseho ho banga tanteraka ny sary.
Fotoana izao hanaovana ny Layer 1 ho Smart Object amin'ny fipihana tsara eo amin'ny sosona ary fisafidianana an'io safidy io.
Ataontsika izany mba hahafahantsika manova ny sivana ary amin'izany afaka manova azy raha mila azy ny sarintsika mba hamokarana vokatra pensilihazo lehibe kokoa.
Na dia tsy manana safidy hiovaova ho zavatra marani-tsaina aza ianao, amin'ity dingana ity dia afaka manohy ianao, satria tsy maintsy mandeha any amin'ny Filtres> Blur> Gaussian Blur.
Ao amin'ny Ny varavarankely gaussian blur dia manova ny radius amin'ny 2,7 teboka. Amin'ity fomba ity dia hanana ny sary isika ary ny tarehy dia hanana ny endriny mety. Raha teo alohan'ny sary hafa isika dia afaka manova ny radius mba hifanaraka tsara kokoa, satria mamiratra ilay ananantsika.
Manome OK izahay raha mampihatra azy.
Handeha isika avereno alaina indray ny sary ambadika miaraka amin'ny fanaraha-maso + J ary atsanganay ho eo an-tampon'ny sosona izy io.
Handeha isika loko tsy mety maty sary miaraka amin'ny Control + Shift + U.
Ankehitriny dia hampiasa sivana hafa avy amin'ny Filter> Filter Gallery> Stylize> Glowing Edges.
Ny hevitra eto dia ny fahitantsika ny drafitra voasoritra, noho izany ampiharintsika ny Edge Width ho 1, ny famirapiratana ho 5, ary ny malama ho an'ny 4.
Manome OK izahay, ary ankehitriny kasiho avadika ny loko amin'ny Control + I.
Fotoana tokony hampiharana ny fomba fampifangaroana Multiply. Hataontsika tsy hita maso ireo pixel fotsy sy ireo maizina.
Toy ny hoe:
Ny hevitra izao dia ny fanomezana ny sary an'io fikasihana saribao io ho an'ny aloka. Izahay dia manao tahaka ny Control + J ary manainga azy eo an-tampon'ny sosona.
Izahay dia mamoaka ny sary amin'ny Control + Shift + U.
Ary mankany isika Sivana> Galerie sivana> Sketch> Arina. Izahay dia mampihatra 1 amin'ny sakan'ny saribao, 4 amin'ny antsipiriany ary 49 amin'ny fandanjana hazavana sy aloka.
Isaky ny manova ny sivana isika dia hiankina amin'ny sary ampiasaintsika foana. Tsy zavatra raikitra izany ary amin'izay tsy maintsy lalaovinao.
Tonga ny fotoana hampiasana ny blend mode "Multiply" ao amin'ny sosona izay ampiharintsika ny Arina.
Ankehitriny, raha manana takelaka Wacom tsaratsara kokoa isika hosarihana. Saingy tsy ilaina izany satria amin'ny totozy, ary na dia tsy mahay manao sary aza isika, afaka mametraka aloka isika rehefa misarika olona ny tsipika.
Misafidy ny borosy amin'ny B izahay ary mametraka habe 31 pixel ka saika manarona ny maso.
Tsapanay fa rehefa mampihatra Arina dia tsy hita miharihary ny iris, ka hampiasa ilay borosy hamoahana azy.
Izahay dia mamorona sarona sarontava amin'ny bokotra eo ambanin'ny varavarankely misy sosona:
Manery izahay Lakile X hanovana ny loko mialoha amin'ny mainty raha banga na hafa. Amin'izany fomba izany, rehefa mandoko mainty isika dia ho takona ireo piksely voafantina.
Mandoko mainty izahay ary hamokatra ilay vokatra tiana. Hitanao eo amin'ny masonao ny mahasamihafa azy:
Afaka manohy mandoko isika mba hamiratra ireo faritra maizina kokoa. Kitiho mandra-pahitanao ny sary tadiavina nefa tsy adino ny mampiasa fifehezana + sora-baventy + Z hamafana raha tsy tianao ny vokany.
Izao no fotoana hanaovana ny borosy kely kokoa miaraka amin'ny 1 na 2 teboka.
mamorona isika sosona vaovao misy Control + Shift + N.
Nampidininay hatramin'ny 56% ny fikorianana mba hahatonga ny mainty ho fotsy ary ho toy ny sary pensilihazo.
Manitatra ny sary izahay ary manomboka mitaona ny sary hamokatra alokaloka pensilihazo.
Raharaha mandany fotoana hampiharana ireo lalana ireo ary ampiasao ny maizina mba ho toy ny voasintona tanana, toy ny amin'ny sary izay asehontsika an-tsary ny fomba fanaovana azy:
Izay teknika azonao atao apetaho amin'ny volo, vatana ary fiadiana araka ity hita eo alohan'ny / aorian'ny sary ity:
Ka hitarina izy io:
Nandoko ny sary iray manontolo, mamorona sosona famenoana henjana vaovao izahay amin'ny fotsy:
Izahay dia mamono ilay sosona vaovao noforonina.
Mandeha amin'ny fantsona ao amin'ny fikandrana fisie izahay ary misafidy ny iray amin'izy ireo. Manga mitovy.
Notaritarinay nankany amin'ny kisary hita teo ambany izy mba hamoronana fantsona vaovao.
Lo mifantina sy mamadika ny loko amin'ny Control + I izahay.
Ny hevitra izao dia ny mamorona ny fisafidianana ireo piksela maivana amin'ny sary. Izahay dia mifehy + tsindrio ny sary kely «Kopia manga».
Mandeha amin'ny fantsona sosona izahay ary mampihetsika ny sosona famenoana.
mamorona isika sosona famenoana loko matevina vaovao ary amin'ny fisafidianana ny loko dia ahitantsika ny fomba hamokarana ny vokatra sepia raha toa ka mampiasa loko volomboasary na volontsôkôlà isika na lasa manga aza.
Amin'ity tranga ity dia hampiasa iray akaikin'ny mainty sy manga isika.
Kitiho OK ary hanana ny sarinay vita izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamadihana sary ho sary miaraka amin'ny Photoshop
Ahoana no hataoko mba hitazomako azy ny loko voalohany? izany hoe toa sary izany nefa tsy mainty sy fotsy? Misaotra anao
Storyboard, ilay fampiharana Google AI vaovao hanovana ny horonan-tsary ho lasa sary an-tsary